မစားရ မသောက်ရနဲ့ ငွေတစ်သိန်း ပလုံသွားတယ် လို့ wave money ကို ပန်ဆယ်လိုပြောပီ - Nalonetardiary
မစားရ မသောကျရနဲ့ ငှတေဈသိနျး ပလုံသှားတယျ အရပျကတို့။
Wave Money ကို မသုံးပါဘူးဆိုတဲ့ကွားက Wave Money နဲ့မှ လှဲခငျြပါတဲ့ ခဈြရတဲ့ Customers ပူတူတူးလေးမြားကွောငျ့ Wave Money ကို မသုံးမဖွဈ သုံးလိုကျရပါတယျ။
ပထမတဈကွိမျ ပဲခူးက Customer မောငျလေးတဈယောကျ ငှတေဈသိနျးလှဲတယျ။ ငှဝေငျကွောငျး မကျဆခြေျ့ဝငျတယျ။ အမရေ.. ငှဝေငျပွီလားဆိုတော့ အေး.. ဝငျပွီပေါ့။
ညနေ သှားထုတျတော့ ထုတျမရဘူး။ Password မှားတာလား၊ ဘာလို့ထုတျမရလဲ မေးတော့ ထုတျပေးတဲ့ Agent ကလညျး မရမေရာ။ မသိဘူး.. ထုတျမရဘူးတဲ့။ ဪ အေးပါဟယျပေါ့။
Customer ဆီ ဖုနျးပွနျဆကျတယျ။ ထုတျမရဘူးဝေ့.. မေးပေးပါဦးဆိုတော့ Wave Money Call Center ကို ဖုနျးဆကျမေးတယျ။ ထုတျသှားပွီတဲ့။ ငငျ.. ထုတျသှားရငျ ထုတျသှားကွောငျး မကျဆခြေျ့ဝငျရမယျလေ၊
အခုက လှဲသူရော လှဲခံရသူရော ဘယျသူ့ဆီမှ မကျဆခြေျ့မဝငျဘူး၊ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ System Error တဲ့။ ဖုနျးခလြိုကျတာနဲ့ နှဈဖကျလုံးကို ထုတျပွီးကွောငျး မကျဆခြေျ့က တနျးဝငျလာတယျ။ ထုတျပွီးတဲ့ မကျဆခြေျ့ကို ခုမှ ခပြေးလိုကျတာတဲ့။
ဘယျကထုတျတာလဲ မေးတော့ ပဲခူးကပဲတဲ့။ အဲ့တော့ ကိုယျထုတျတာ မဟုတျကွောငျး ရှငျးသှားတယျ။ ဝယျသူကောငျလေးကတော့ ပလုံသှားရှာတယျ။
အခုတဈခါကြ အိုငျပလုံတာ။ မွောကျဒဂုံက ညီမလေးတဈယောကျက ငှလှေဲတယျ။ အဲ့ညနေ သှားထုတျတယျ .. ထုတျမရဘူး။ ပွနျမေးတော့ Password မမှားဘူးဆိုလို့ နောကျနေ့ ထပျသှားထုတျတယျ။
ထုတျမရဘူး။ Wave Money Call Center ကိုဆကျတယျ။ ပထမတဈခါအတိုငျး ပွောတယျ။ ပွီးတော့ မကျဆခြေျ့ ခပြေးလိုကျတယျ။ ကတောငျ.. ပလုံပဲ။
ထုတျသှားတာက အိုငျနတေဲ့နရော၊ အိုငျထုတျနတေဲ့ဆိုငျပဲ။ ကိုယျသှားထုတျတယျ.. ID နဲ့ Password သိသှားတယျ။ ထုတျမရဘူးဆိုပွီး ကိုယျပွနျသှားမှ ထုတျသှားတယျ။ ဒါပဲ ဖွဈနိုငျစရာ ရှိတယျ။
ခိုးထုတျတဲ့ဆိုငျသိနတောပဲ ပွသနာရှာလေ မပွောနဲ့။ ဘာသကျသမှေ မရှိဘဲ သှားပွောရငျ အသရဖေကျြပါတယျဆိုပွီး အမှုတောငျ ပတျသှားဦးမယျ။ ထားလိုကျတော့….
နားမလညျတာက အဲ့လို ခိုးထုတျတိုငျး ဘာလို့ ငှထေုတျရငျ ဝငျရမယျ့ မကျဆခြေျ့က လှဲသူနဲ့ လကျခံသူဖုနျးထဲ ဘာလို့ ဝငျမလာတာတုနျး။
မေးလိုကျရငျ Error နငျ့မဂြေီးတျော Error ခိုးထုတျခံရတဲ့အခြိနျကိုကျ Message Error ဖွဈဖို့က နညျးတဲ့ ကုသိုလျလား။
Call Center ကို ဖုနျးဆကျပွနျရငျလညျး အသံသှငျးထားသလို နှုတျတိုကျကကျြထားတဲ့ လသေံတှနေဲ့ ကွားနကေစြကားတှပေဲ ပွောတယျ။
ရုံးက ဘယျမှာလဲ၊ လာပွောမယျဆိုတော့လညျး ရုံးလိပျစာ ပွောမရဘူးတဲ့။ တရားဝငျငှလှေဲဌာနလေ.. မှောငျခိုဂိုဏျးမို့ လိပျစာ ပွောမရတာလား။ ကိုယျတို့က အဲ့လို တာဝနျခံမှု မရှိတာကွီးကို ငပေါမို့ ဆကျသုံးရမှာလား။
သုံးမိသမြှ ဘဝအဆကျဆကျ နောငျတရပါတယျ။ ကိုယျရှာထားတဲ့ ကိုယျ့ခြှေးနှဲစာ တဈသိနျးလညျး နှမြောတယျ။
တဈသောငျးလညျး နှမြောတယျ။ သှားထုတျစရာမလိုအောငျ အကောငျ့ ဖှငျ့ပွနျတော့လညျး လေးသိနျးပဲ ထညျ့လို့ရတယျ။ Upgrade လုပျတဲ့။ လုပျပွနျတော့လညျး ရကျစောငျ့ရတယျ။
ရပွနျတော့လညျး သိနျး၂၀ ပဲ ထညျ့လို့ရတယျတဲ့။ Agent Account ဆိုရမလားမေးတော့လညျး ဆိုငျလိုငျစငျနဲ့ ဘာညာစာရှကျတှပေေးတဲ့။ နတေော့…
Wave Money မသုံးပါဘူးရှငျဆိုတော့ ခဈြCustomer အသဲတုံးလေးမြားက မာနကွီးတာလား ငွိုငွငျသေးတယျ။
ထုတျမရတဲ့ ဘယျသူလှဲမှနျး မမှတျမိတော့လို့ Password မေးမရတော့တဲ့ သောငျးဂဏနျးတှလေညျး ဘယျနှခါမှနျးမသိ ဆုံးပေါငျးမြားနပွေီ။ တျောကွပါတော့။ ရိုးရိုး စီးပှါးဖကျြလညျး ပကျြပါတယျ အတေို့ရယျ…
လူလိမျတှေ လိမျရငျ အဲ့ကပဲ ငှလှေဲခိုငျးတယျ။ ဘယျသူထုတျသှားမှနျး လိုကျလို့မှ မရတာ။ လူတှေ အလိမျခံရတာမြားလို့ အျောကွတော့ ငှထေုတျရငျ မှတျပုံတငျ ယူလာရမယျလို့ ကွျောငွာတယျ။ အဲ့လိုသာကွျောငွာတာ အိုငျထုတျနတော မှတျပုံတငျမတောငျးပေါငျ။
ပွညျသူတှရေဲ့ ပိုကျဆံတှေ အလိမျခံရ၊ အခိုးခံရနဲ့ ဖွဈနတေဲ့စနဈကွီးကို ဘယျတာဝနျရှိသူတှကေ စိစဈပေးကွမှာလဲ မသိ။
အခုလညျး ကိုယျ့ငှပေလုံလို့ ကိုယျရေးတာ။
အသရဖေကျြရအောငျ လငျလုဖကျလဲ မဟုတျဘူး။ ဘာညာလာခွိမျးခွောကျလို့က စားသုံးသူရေးရာ တိုငျမှာ။
အခုကတော့ စိတျလြှော့ပွီး အမြှဝထေားလိုကျပွီ
ငှထေုတျရငျ မကျဆခြေျ့ဝငျနကေတြောငျ သူခိုးက ငှခေိုးထုတျတိုငျး မကျဆခြေျ့မဝငျအောငျ အခြိနျကိုကျ Error တဲ့ System ကွီးလညျး ကနျြးမာပါစနေျော
မစားရ မသောက်ရနဲ့ ငွေတစ်သိန်း ပလုံသွားတယ် အရပ်ကတို့။
Wave Money ကို မသုံးပါဘူးဆိုတဲ့ကြားက Wave Money နဲ့မှ လွှဲချင်ပါတဲ့ ချစ်ရတဲ့ Customers ပူတူတူးလေးများကြောင့် Wave Money ကို မသုံးမဖြစ် သုံးလိုက်ရပါတယ်။
ပထမတစ်ကြိမ် ပဲခူးက Customer မောင်လေးတစ်ယောက် ငွေတစ်သိန်းလွှဲတယ်။ ငွေဝင်ကြောင်း မက်ဆေ့ခ်ျဝင်တယ်။ အမရေ.. ငွေဝင်ပြီလားဆိုတော့ အေး.. ဝင်ပြီပေါ့။
ညနေ သွားထုတ်တော့ ထုတ်မရဘူး။ Password မှားတာလား၊ ဘာလို့ထုတ်မရလဲ မေးတော့ ထုတ်ပေးတဲ့ Agent ကလည်း မရေမရာ။ မသိဘူး.. ထုတ်မရဘူးတဲ့။ ဪ အေးပါဟယ်ပေါ့။
Customer ဆီ ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်။ ထုတ်မရဘူးဝေ့.. မေးပေးပါဦးဆိုတော့ Wave Money Call Center ကို ဖုန်းဆက်မေးတယ်။ ထုတ်သွားပြီတဲ့။ ငင်.. ထုတ်သွားရင် ထုတ်သွားကြောင်း မက်ဆေ့ခ်ျဝင်ရမယ်လေ၊
အခုက လွှဲသူရော လွှဲခံရသူရော ဘယ်သူ့ဆီမှ မက်ဆေ့ခ်ျမဝင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ System Error တဲ့။ ဖုန်းချလိုက်တာနဲ့ နှစ်ဖက်လုံးကို ထုတ်ပြီးကြောင်း မက်ဆေ့ခ်ျက တန်းဝင်လာတယ်။ ထုတ်ပြီးတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို ခုမှ ချပေးလိုက်တာတဲ့။
ဘယ်ကထုတ်တာလဲ မေးတော့ ပဲခူးကပဲတဲ့။ အဲ့တော့ ကိုယ်ထုတ်တာ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းသွားတယ်။ ဝယ်သူကောင်လေးကတော့ ပလုံသွားရှာတယ်။
အခုတစ်ခါကျ အိုင်ပလုံတာ။ မြောက်ဒဂုံက ညီမလေးတစ်ယောက်က ငွေလွှဲတယ်။ အဲ့ညနေ သွားထုတ်တယ် .. ထုတ်မရဘူး။ ပြန်မေးတော့ Password မမှားဘူးဆိုလို့ နောက်နေ့ ထပ်သွားထုတ်တယ်။
ထုတ်မရဘူး။ Wave Money Call Center ကိုဆက်တယ်။ ပထမတစ်ခါအတိုင်း ပြောတယ်။ ပြီးတော့ မက်ဆေ့ခ်ျ ချပေးလိုက်တယ်။ ကတောင်.. ပလုံပဲ။
ထုတ်သွားတာက အိုင်နေတဲ့နေရာ၊ အိုင်ထုတ်နေတဲ့ဆိုင်ပဲ။ ကိုယ်သွားထုတ်တယ်.. ID နဲ့ Password သိသွားတယ်။ ထုတ်မရဘူးဆိုပြီး ကိုယ်ပြန်သွားမှ ထုတ်သွားတယ်။ ဒါပဲ ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိတယ်။
ခိုးထုတ်တဲ့ဆိုင်သိနေတာပဲ ပြသနာရှာလေ မပြောနဲ့။ ဘာသက်သေမှ မရှိဘဲ သွားပြောရင် အသရေဖျက်ပါတယ်ဆိုပြီး အမှုတောင် ပတ်သွားဦးမယ်။ ထားလိုက်တော့….
နားမလည်တာက အဲ့လို ခိုးထုတ်တိုင်း ဘာလို့ ငွေထုတ်ရင် ဝင်ရမယ့် မက်ဆေ့ခ်ျက လွှဲသူနဲ့ လက်ခံသူဖုန်းထဲ ဘာလို့ ဝင်မလာတာတုန်း။
မေးလိုက်ရင် Error နင့်မေဂျီးတော် Error ခိုးထုတ်ခံရတဲ့အချိန်ကိုက် Message Error ဖြစ်ဖို့က နည်းတဲ့ ကုသိုလ်လား။
Call Center ကို ဖုန်းဆက်ပြန်ရင်လည်း အသံသွင်းထားသလို နှုတ်တိုက်ကျက်ထားတဲ့ လေသံတွေနဲ့ ကြားနေကျစကားတွေပဲ ပြောတယ်။
ရုံးက ဘယ်မှာလဲ၊ လာပြောမယ်ဆိုတော့လည်း ရုံးလိပ်စာ ပြောမရဘူးတဲ့။ တရားဝင်ငွေလွှဲဌာနလေ.. မှောင်ခိုဂိုဏ်းမို့ လိပ်စာ ပြောမရတာလား။ ကိုယ်တို့က အဲ့လို တာဝန်ခံမှု မရှိတာကြီးကို ငပေါမို့ ဆက်သုံးရမှာလား။
သုံးမိသမျှ ဘဝအဆက်ဆက် နောင်တရပါတယ်။ ကိုယ်ရှာထားတဲ့ ကိုယ့်ချွေးနှဲစာ တစ်သိန်းလည်း နှမျောတယ်။
တစ်သောင်းလည်း နှမျောတယ်။ သွားထုတ်စရာမလိုအောင် အကောင့် ဖွင့်ပြန်တော့လည်း လေးသိန်းပဲ ထည့်လို့ရတယ်။ Upgrade လုပ်တဲ့။ လုပ်ပြန်တော့လည်း ရက်စောင့်ရတယ်။
ရပြန်တော့လည်း သိန်း၂၀ ပဲ ထည့်လို့ရတယ်တဲ့။ Agent Account ဆိုရမလားမေးတော့လည်း ဆိုင်လိုင်စင်နဲ့ ဘာညာစာရွက်တွေပေးတဲ့။ နေတော့…
Wave Money မသုံးပါဘူးရှင်ဆိုတော့ ချစ်Customer အသဲတုံးလေးများက မာနကြီးတာလား ငြိုငြင်သေးတယ်။
ထုတ်မရတဲ့ ဘယ်သူလွှဲမှန်း မမှတ်မိတော့လို့ Password မေးမရတော့တဲ့ သောင်းဂဏန်းတွေလည်း ဘယ်နှခါမှန်းမသိ ဆုံးပေါင်းများနေပြီ။ တော်ကြပါတော့။ ရိုးရိုး စီးပွါးဖျက်လည်း ပျက်ပါတယ် အေတို့ရယ်…
လူလိမ်တွေ လိမ်ရင် အဲ့ကပဲ ငွေလွှဲခိုင်းတယ်။ ဘယ်သူထုတ်သွားမှန်း လိုက်လို့မှ မရတာ။ လူတွေ အလိမ်ခံရတာများလို့ အော်ကြတော့ ငွေထုတ်ရင် မှတ်ပုံတင် ယူလာရမယ်လို့ ကြော်ငြာတယ်။ အဲ့လိုသာကြော်ငြာတာ အိုင်ထုတ်နေတာ မှတ်ပုံတင်မတောင်းပေါင်။
ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အလိမ်ခံရ၊ အခိုးခံရနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့စနစ်ကြီးကို ဘယ်တာဝန်ရှိသူတွေက စိစစ်ပေးကြမှာလဲ မသိ။
အခုလည်း ကိုယ့်ငွေပလုံလို့ ကိုယ်ရေးတာ။
အသရေဖျက်ရအောင် လင်လုဖက်လဲ မဟုတ်ဘူး။ ဘာညာလာခြိမ်းခြောက်လို့က စားသုံးသူရေးရာ တိုင်မှာ။
အခုကတော့ စိတ်လျှော့ပြီး အမျှဝေထားလိုက်ပြီ
ငွေထုတ်ရင် မက်ဆေ့ခ်ျဝင်နေကျတောင် သူခိုးက ငွေခိုးထုတ်တိုင်း မက်ဆေ့ခ်ျမဝင်အောင် အချိန်ကိုက် Error တဲ့ System ကြီးလည်း ကျန်းမာပါစေနော်
အိ ပန် ဆယ် လို